Fanorenana ifotony Tetika izorana any amin’ny federalisma
Gerard Ramamimampionona - CFM « Ny omby miasa tsy maintsy misy mikapoka »
Anisan’ireo sampandraharaha iharana tsikera koa ankehitriny ny avy eo anivon’ny komitin’ny fampihavanana malagasy na CFM manoloana ny tsy fetezan-java-mitranga eto amin’ny firenena, dia ny fifidianana.
Kandida nampiasa volabe Hosarontsaronana ny raharaha…
Voafatotry ny fisorohana ny rotaka politika ny fampiharan-dalàna eto Madagasikara, raha jerena amin’ny zava-misy eto amin’ny firenena amin’izao fotoana. Sarontsaronana amina kazarana didy miendrika fandaminana ny fampiharan-dalàna eto,
Fitakiana fanafoanana fifidianana Noraisin’ny CENI
Tonga nanatitra ny taratasy fitakian’izy ireo ny hanafoanana ny fifidianana izay nitranga ny 7 novambra teo tetsy amin’ny CENI Alarobia omaly ireo hery politika isan-karazany toy ny firaisankinan’ireo kandida sy fikambanana politika maro sy ireo mpanaradia azy.
Fanakorontanana ny fifidianana Misy paikady avo lenta ao ambadika ?
Mahalasa saina tanteraka ny zava-nitranga rehetra tao anatin’izao fotoam-pifidianana izao na ny nialoha na ny nandritra ary ny ankehitriny.
Ravalomanana sy Rajoelina Fihodianana faharoa hampangitakitaka
Hifampitady any anaty fifidianana filoha fihodinana faharoa i Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina, 9 taona aty aorian’ny fanonganam-panjakana tamin’ny taona 2009, rehefa tratry ny “ni…ni…” tamin’ny taona 2013.
Saika mamoitra ny filana sy mahamaika ny atao hoe fanorenana ifotony avokoa ireo mpanao politika tsy tao anatin’ny rafi-panjakan’ity fitondrana HVM ity rehetra. Rehefa dinihana dia toa tetika iraisan’ny ankamaroan’izy ireo ihany koa izy io idirana any amina rafitra federaly na ny federalisma.
Anisan’ny mivoy izany ny antoko Kintana, tarihin’i Tabera Randriamanantsoa, ry zareo avy eo anivon’ny Olona Hasin’ny Tany (OHT) ary misy mihitsy moa ilay vovonan’ireo federalista miaraka amin’ireo mpanao politika maro toa an-dry Max Fabien sy ry Ferdinand Razakarimanana. Efa hita anefa ny fahasahiranana tamin’ny fametrahana ny faritany mizakatenan’ny filoha Ratsiraka tamin’ny fotoan’androny. Tsy vao mainka hiteraka fisaraham-bazana ve io, kanefa fampihavanana no katsahina eto ? Rahampitso amin’ny 9 ora maraina dia hamory ireo mpomba azy etsy amin’ny Live Hotel Andavamamba ry zareo eo anivon’ny Hetsika Fanorenana Ifotony (HFI) hanazavan’izy ireo mikasika ny tiany hahatongavana.